मन्त्रीमण्डलमा सामेल निसिथ प्रमाणिकको शैक्षिक योग्यतामाथि चुलियो विवाद - खबरम्यागजिन
Homeखबरमन्त्रीमण्डलमा सामेल निसिथ प्रमाणिकको शैक्षिक योग्यतामाथि चुलियो विवाद
दुई दिन अगाडि केन्द्रीय मन्त्रीमण्डलमा गृहमन्त्री अमित शाहको सहायकको रूपमा सामेल भएका कुचविहारका भाजपा सांसद विवादको घेरोमा परेका छन्। प्रमाणिक विवादको घेरोमा पर्नको कारण उनले संसद अनि चुनाव नामाङ्कनमा उल्लेख गरेको नितान्त फरक शैक्षिक योग्यताको कारण हो।
३५ वर्ष पुगेका निसिथले भर्खरै सम्पन्न भएको बङ्गाल विधानसभा चुनाव लडेका थिए। दिनहट्टा विधानसभा क्षेत्रमा ५७ भोटको पातलो सिमाले चुनाव जितेका उनले लोकसभा सदस्यता यथावत राख्न राजीनामा पनि दिइसकेका छन्।
लोकसभा अनि विधानसभा दुईवटै चुनावको नामाङ्कन पत्रमा उनले आफ्नो शैक्षिक योग्यता माध्यमिक उतीर्ण लेखेका छन्। विधानसभा चुनावको निम्ति उनले १८ मार्च २०२१ अनि लोकसभा चुनावको निम्ति २५ मार्च २०१९ को दिन नामाङ्कन पत्र बुझाएका हुन्।
तर लोकसभाको आधिकारिक वेबसाइटमा उनको शैक्षिक योग्यता बि.सि.ए लेखिएको छ। अचम्मको कुरा के छ भने, उनले बि. सि. ए गरेको शैक्षिक संस्थानको नाम बालाकुरा जुनियर प्राथमिक पाठशाला लेखिएको छ जहाँ केवल पाँच कक्षासम्मको पढाई हुन्छ।
बि.सि.ए स्नातक स्तरको अध्ययन हो, जसको निम्ति तीन सालको समय लाग्छ। यसमा भर्नाको निम्ति कम्तिमा उच्च माध्यमिक उतीर्ण हुन जरूरी छ।
द वायरका पत्रकार स्निग्देन्दु भट्टाचार्यले निसिथसँग यसबारे जान्न चाहेको तर निसिथले अहिलेसम्म यसको जवाब नदिएको बताएको छ।
निसिथले २०१९ को नामाङ्कन पत्रमा आफू विरूद्ध ११ अनि २०२१ मा १३ अपराधिक मुद्दा रहेको लेखेका छन् जसमा हत्या, लुटपाट, चोरी अनि आफूसँग बिस्पोटक पदार्थ राखेको मामिला सामेल छन्।
सन् २०१८ सम्म उनी तृणमूल काङ्ग्रेसका युवा नेता थिए। उनलाई पार्टीले निष्कासन गरेपछि मुकुल रोयको मध्यस्ततामा भाजपामा सामेल गराइएको बताइन्छ।
चुनावपछि मुकुल रोयले तृणमूलमा वापसी गरेपछि प्रमाणिक पनि तृणमूलमा फर्कने व्यापक अडकलबाजी चलेको थियो।
विमल खेमामा फेरबदल